Ndira 11, 2019 Denial245
The 10.0.0.1 chinhu private IP kero, Zviri chaizvo zvakafanana 192.168.1.1 IP Address, uye It unowanzoshandiswa nemakambani mazhinji router sechinhu default IP kero iri nevatengi mano kana zvimwe Network Hardware.
The 10.0.0.1 IP kero iri yaiwanzoshandiswa bhizimisi kombiyuta network uye 192.168.1.x IP kero chinoonekwa kumba kombiyuta network.
izvi, zvisinei, anogona kushandiswa uchitsanangura pasina kuita chero dambudziko. Mienzaniso routers vachishandisa 10.0.0.1 IP kero dzavo default IP kero vari Xfinity routers uye Cisco muchiso routers inopiwa Comcast.
10.0.0.1 IP kero kana 10.0.0.0.1 IP kero chimwe chezvinhu kushandiswa IP nokuda routers. Zvinofanira kushandiswa kuwana router arun Panel. By kutema kupinda router arun Panel, unogona kuchinja kwako router Wi-Fi pasiwedhi, disposal matambudziko samambure, kuti samambure yako akachengeteka zvikuru, aongorore DNS yako (Domain Name System), Lan (Local Area Network), Marshal Kurongwa uye murinde mano zvose zvakabatana Network wako.
Sei Login 10.0.0.1?
➥ Chokutanga kuzarura chero dandemutande Browser pamusoro PC yako.
➥ Zvadaro kutaipa http:://10.0.0.1 mu padandemutande mubrowser kero nomuzariro uye muchisviniro Enter.
➥ Izvi Inokumbira Browser kutungamirirwa Router Admin peji.
➥ pano unogona mafomu Login mashoko arun (i.e.. Username uye pasiwedhi). Kupinda default Username uye Password nokuda mudziyo.
Kana usingagoni batanidza kuti 10.0.0.1?
shamwari dzangu kana iwe usingagoni kuona Router arun Panel, nechokwadi kuti imi kutanga vataipa ari IP kero yakakodzera. nguva zhinji 10.0.0.0.1 uye 10.0 0.0 1 zvakanyorwa pane kuti 10.0.0.1. IP kero zvinosanganisira chete digits uye nguva, kwete tsamba. The IP kero kushandiswa kuwana inotungamirira inowanikwa pakati router yako haisi 10.0.0.1.
10.0.0.1 Router Username & Password List
10.0.0.1 arun pasiwedhi
10.0.0.1 arun arun
10.0.0.1 (chinhu) (chinhu)
Kuti yakanga zvose pamusoro 10.0.0.1 IP Login Admin. I Tariro imi vakomana zvakadai this post, asi kana imi kusangana chero dambudziko panyaya this post, zvino tapota kupindura kwatiri tichaedza kugadzirisa dambudziko rako nekukurumidza, ngaavongwe nokuti kushanyira kwedu nzvimbo.
Previous Post:192.168.2.1 Username & Pasiwedhi – 192-168-1-1l.com